धन्यवाद ट्रे ट्रे पेन्टिंगटन | Martech Zone
धन्यवाद ट्रे ट्रेनिंगटन
आइतवार, सेप्टेम्बर 4, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
यस बिहान केही चौंकाउने समाचारहरू, अप्रत्याशित मृत्युको सुन्दा ट्रे पेनिंगटन। मार्चमा, ट्रे र जेले मलाई उनीहरूको रेडियो कार्यक्रममा हुन आग्रह गरे, व्यवसायका लागि खोल्नुहोस्। यो ब्लगिंग को निरन्तर लोकप्रियता को बारे मा एक महान कुराकानी थियो र ट्रेले मलाई वास्तव मा शो भर स्पटलाइट दिए। यदि तपाईं उसको फेसबुक पर्खाल पढ्नुहुन्छ भने, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि निःस्वार्थता धेरै नै सामान्य थियो सन्देशहरूमा जुन उनका अनुयायीहरू र साथीहरूले छोडेका थिए।
मलाई कुनै विवरणहरू थाहा छैन तर यस्तो देखिन्छ कि ट्रेले आफ्नो जीवन लिए। यसले धेरै तर्साउँछ। ट्रेको नेटवर्कले केहि व्यक्तिलाई मद्दतको लागि आग्रह गरिरहेको छ यदि उनीहरूसँग आफ्नै जीवन लिने बारे कुनै सोच छ भने। म पक्कै पनि प्रोत्साहित गर्दछु।
त्यहाँ मेरो अन्तर्निहित चिन्ताको विषय छ, यद्यपि। ट्रेको अनलाइन व्यक्तित्व अचम्मको थियो। ऊ प्राय: यात्रा गर्थ्यो र पूर्ण रूपमा आफ्नो नेटवर्कमा व्यस्त थियो। उसको ट्विटर पृष्ठ ट्वीट्सको अन्त्य नभएको प्रवाह हो जसले अरूलाई प्रोत्साहन, धन्यवाद र प्रमोट गर्‍यो। मेरो लागि चिन्ता यो थियो कि यो अविश्वसनीय नेटवर्क को नेटवर्क पर्याप्त थिएन। हामी जस्तो पारदर्शी छौं, हामी अझै पनि व्यक्तिहरू अनलाइन विकास गर्दछौं जुन सधैं हाम्रो अफलाइन चुनौतीहरूसँग मेल खाँदैन।
अर्थव्यवस्था अहिले बेकार छ। केही व्यक्ति यसलाई बेवास्ता गर्न भन्छन् र केवल अगाडि बढिरहनुहोस् ... तर मलाई एक व्यवसाय मालिकको रूपमा केही गम्भीर चिन्ताहरू छन्। त्यस्तो समयमा जहाँ मेरो एजेन्सीले निरन्तर सफलता देखिरहेको छ, हामी अझै चुनौति भएका छौं। हाम्रा ग्राहकहरूको लागि १००% राख्नुको सट्टा, हामी आफैंलाई १ 100०% भित्र राख्दै भेट्टायौं ... र कहिलेकाँही ती पनि पर्याप्त छैन - मागहरू बढ्न जारी रहन्छ। जब हामी कडा परिश्रम गरिरहेका छौं र हाम्रा ग्राहकहरू बढ्दैछन्, ती हुन् उनीहरूको क्यासफ्लोलाई असर गर्ने समस्याहरू छन् ... र यो त्यस्तो कुरा हो जुन हामी सँधै असर गर्छ।
लाई जीत यो उद्योग मा, तपाईं बढ्न छ। बढ्न क्रममा, तपाईं संलग्न हुनुपर्दछ र निरन्तर एक अर्कोलाई प्रमोट गर्नुपर्दछ। जब तपाईंको नेटवर्क ठूलो हुँदै जान्छ, अपेक्षाहरू पनि बढ्दै जान्छ। तपाईले प्रदान गर्नुभएको प्रत्येक भाषण अन्तिम भन्दा राम्रो हुनुपर्दछ। तपाईले लेख्नु भएको हरेक पुस्तक उत्तम बिक्रेता हुनुपर्दछ। प्रत्येक ब्लग पोष्ट भाइरल हुनु पर्छ। जहिले पनि कसैले तपाईंलाई सम्पर्क गर्दछ, तपाईंले उनीहरूलाई बदलामा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ... वा अन्यथा तपाईं या त कपटी वा कुनै प्रकारको अभिजात वर्गको रूपमा देख्नुहुनेछ। तथ्य यो हो कि यस उद्योगमा पेसा पेशेवरहरूमाथि राखिएको मागहरू अत्यन्त भारी छन्।
म सामाजिक मिडिया उद्योग को नेताहरु को बारे मा अधिक र अधिक पढ्दै छु छु उनीहरु को बीचमा राख्न कर्मचारी राखी र उनीहरुको नेटवर्क को लागी र अटोरेब्लिटी को सूचनाहरु संग अनुरोध गर्न autoresponding। मेरा साथीहरूले मसँग कुराकानी गरे कि मलाई कल गर्न वा मेरो समात्नुहोस्। केही कम बुझ्ने व्यक्तिहरूले मलाई निराश सन्देशहरू छोडिदिन्छन्, त्यसपछि मलाई ट्वीट गर्नुहोस्, त्यसपछि मलाई फेसबुकमा सम्पर्क गर्नुहोस् ... त्यसपछि पूर्णतया निराश हुनुहोस् कि म उत्तरदायी छैन।
यस हप्ताको सुरूमा, मैले कम्पनमा मेरो फोन छोडिदियो र यसले हरेक केही मिनेटमा नयाँ कलको साथ गैर स्टप कम्पन गर्दछ। मैले अन्ततः यसलाई बन्द गर्‍यो (जस्तो म अक्सर गर्छु)। जब म हरेक सप्ताहन्तमा काम गर्थें, अब म साथीहरू र परिवारका लागि समय लिन्छु - कामको बोझ वा अनुत्तरित सन्देशहरूको पर्वाह नगरी। म सजिलैसँग व्यवसाय चलाउन, कार्य कार्यान्वयन गर्न, मेरो व्यापार मार्केटिंग गर्न र मेरो नेटवर्कबाट प्रत्येक अनुरोधको जवाफ दिन सक्दिन। जब मलाई समय चाहिन्छ, मेरो नेटवर्कसँग संचार गडबडी हुन्छ।
म गुनासो गरिरहेको छैन। यो संसार हो जुन मैले अपनाएको छु र भित्र काम गर्न रोजेको छु, र यो मलाई मन पर्छ। म तपाईंहरू सबैलाई मात्र सोधिरहेछु जसले एक मिनेट लिनको लागि अनलाइन पेशेवरहरूले गरेको कामबाट फाइदा लिन्छन्, उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् ... र बुझ्नुहोस् कि हामी सक्दो राम्रो गरिरहेका छौं।
ट्रे पेनिंगटन थियो चार पटक म संग छ कि निम्न। म उहाँसँग भएका मांगहरू कल्पना गर्न सक्दिन। हामीले उनलाई रेडियोको समर्थनमा धन्यवादको रूपमा चाँडै ट्रे प्राप्त गर्ने आशा गरिरहेका थियौं ... मलाई दुखः छ कि हामी त्यो अवसर प्राप्त गर्दैनौं। तर ट्रेले मलाई आफ्नो नेटवर्कसँग कुराकानी गर्न दिएको अवसरको लागि म उहाँप्रति आभारी छु। त्यो मान्छे को प्रकार थियो। र म सँगै हामी अनलाइन समयको लागि आभारी छु।
पंचट्याब: सामाजिक पुरस्कार र कुनै पनि साइटको लागि वफादारी
२०११ सोशल मिडिया बृद्धि
सेप्टेम्बर १,, २०११ 4::2011० अपराह्न
चिलिंग। ऊ Tweets घण्टा पहिले ट्वीट्सलाई जवाफ दिँदै थियो। साँच्ची नै मूल्यलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्नुहोस् र आवश्यक परेको बेला सहयोग लिन हिचकिचाउनुहोस्।
ठीक छ, spragued।
एक बर्ष भन्दा पनि पहिले, हाम्रो मण्डलीले आत्महत्याको कारण एक धेरै प्रिय मित्र गुमायो। यो स्तब्ध भयो र उही प्रश्नहरू जुन तपाईंले तपाईंको पोस्टमा उठाउनुभयो र हामीले आत्महत्या र उदासिनता जटिल प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न शोकसम्बन्धी परामर्श सत्रको आयोजना गर्नुपर्‍यो। यस घटनामा मैले धेरै कुरा सिके। ट्रे पेनिंगटनको मृत्युको सुनुवाइले केही पीडादायी भावनाहरू र प्रश्नहरू पुनर्जीवित गर्यो कि अब म विगतको गिरावट भन्दा पनि बढी शान्तिमा छु।
तपाईले दबाब र मागहरूको बारेमा जुन कुरा उठाउनुहुन्छ निश्चित रूपमा राम्रो बिन्दु हो। मानव आत्मालाई केही आराम चाहिन्छ र धेरै पीडा सहन सक्दैन।
मेरा विचार र संवेदना ट्रेको परिवार र साथीहरूमा जान्छन्। उहाँको विरासत सधैं एक आशिष् को लागि हुन सक्छ र सबै संभव छ भने चाँडै सान्त्वना पाउन सक्छ।
सेप्टेम्बर 5, 2011 मा 4: 30 AM
मैले केहि वर्ष अघि यस प्रकारको अर्को साथी गुमाएँ र यो एक वेक अप कल थियो। यसले मलाई ती दिनहरूमा पनि सोच्न बाध्य तुल्यायो र यसले मेरो व्यवहारमा कुनै प्रभाव पारे पनि। म पक्का छु कि ट्रेको विरासत प्रेरणाको अविश्वसनीय स्रोतको रूपमा विजय हुनेछ। म पनि यो डरलाग्दो समयमा उसको परिवार र साथीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु।
मैले भर्खरै बिहान ट्रेको बारेमा डीसी सोशल मीडिया समुदायबाट ट्वीटहरू द्वारा सिके। धेरै दुखि। उसको मृत्युले यति अधोरेखित गर्दछ कि धेरै पीडामा परेका व्यक्तिहरू आफैंबाट ध्यान केन्द्रित गरिरहन्छन्, यदि ऊ सँधै अरूलाई चियरलिड गरिरहेको थियो, जस्तो कि तपाईले यहाँ दर्साउनु भएको छ (र मैले कहिँ पढेको छु।) म दीर्घकालीन उदासिन पीडितको रूपमा बोल्दछु। मद्दतको लागि सोध्नु भन्दा यो अरू मानिसहरूलाई समर्थन गर्न धेरै सजिलो छ। यो एक राम्रो (र वास्तवमै अर्थपूर्ण!) तरीकाले महसुस गर्न वा अझ कडा देखिन्छ। र हामी यस्तै द्रुत गतिशील संस्कृतिमा बाँचिरहेका छौं जुन हामी जस्तो जडान भएको जहिले पनि हामीलाई समय र शक्ति दिन पुग्दैन।
म उसका साथीहरु र परिवार को लागी, र उनीलाई लाग्छ। आफ्नो जीवन समाप्त गर्न छनौट गर्न एक अकल्पनीय पीडामा हुनुपर्दछ। मलाई आशा छ कि समान स्ट्रिटहरुमा अरुहरु पुग्न प्रेरणा पाउनेछन्।
सेप्टेम्बर 5, 2011 मा 4: 34 AM
डिप्रेसन यस्तो कपट हत्यारा, Laurie हो। मद्दतको सम्बन्धमा तपाई एकदम सहि हुनुहुन्छ। वास्तवमा, मँ भन्छु कि कहिलेकाँही अरूलाई सहायता गर्दाको आनन्दले प्राय: अरूले दु: ख भोग्दो आँगनलाई पन्छाउन मद्दत गर्दछ। यदि कोहीले यी टिप्पणीहरू पढिरहेको छ र संघर्ष गरिरहेको छ भने, म पक्कै आशा गर्दछु कि तिनीहरू मद्दतको लागि गएछन्। केहि यति निराश छैन ... हामी मद्दत प्राप्त गर्न सक्छौं र हामी फेरि आनन्द पाउन सक्छौं।
सेप्टेम्बर 5, 2011 मा 1: 47 AM
उत्कृष्ट पोस्ट डग्लस। त्यहाँ तपाईले दुई विन्दुहरु बनाउनु भयो जुन मेरो लागि चासोको विषय थियो:
१) "हामी जस्तो पारदर्शी छौं, हामी अझै पनि अनलाइन व्यक्तिको विकास गर्दछौं जुन सधैं हाम्रो अफलाइन चुनौतीहरूसँग मेल खाँदैन।" <= यति सत्य र चार्ज भएको रूपमा दोषी। विडम्बना भनेको यो हो कि जे भए पनि म यो बिर्सन्छु कि अरू सायद पनि छन्। त्यसोभए जब तपाइँ फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ र तपाइँ साथीहरूले प्राप्त गरेका सबै सफलताका बारे अद्यावधिक अद्यावधिकहरू देख्नुहुन्छ, उनीहरूले पाइरहेका सबै 'रमाईलो', यसले मलाई अझै उदास र बोर्याइ भएको महसुस गर्दछ।
२) "मेरा साथीहरूले मलाई कल गर्न वा मलाई समात्न सक्षम नहुनुको बारेमा मसँग मजाक गरे।" <= म आफैंसँग यो सर्तमा आएको छु। जब यो तपाईंको नेटवर्कबाट सोधपुछको जवाफ दिन आउँछ। सत्य यो हो कि कामको दिनमा साथीहरूसँग कुरा गर्नु र केही प्रश्नहरूको जवाफ दिनु, आय आर्जन गर्ने गतिविधि होइन। र जब यो तल आउँदछ, तपाईंले साँच्चिकै आफ्नो समयको रक्षा गर्नुपर्दछ र हो, ढोकावाहकहरू भाडामा लिनुहोस् र प्रश्नहरू जुन तपाईंको ध्यान अहिले तुरून्त चाहिन्छ र ती फरक पार्दैन बीचमा छुट्याउन। मैले बिस्तारै इनबाउन्ड कलहरू हालसालै प्रतिबन्धित गरिरहेको छु र यो कठोर देखिन्छ तर यो त्यस्तो चीज हो जुन मैले गर्ने भनेको एक्लोपिनरको रूपमा मेरो समय अधिकतम बनाउन र बेकन घरमा ल्याउनु हो।
निश्चित रूपमा ट्रे ट्रे पेन्टिंगटनको बारेमा सुनेकोमा पछुताव छ। उनको काम संग परिचित थिएन। म पढ्दैछु सबै ट्वीट्सबाट, ऊ एक राम्रो मान्छे भएको जस्तो देखिन्थ्यो जसले सोशल मिडिया र मार्केटिंग उद्योगमा ठूलो योगदान दिए।
सेप्टेम्बर 5, 2011 मा 4: 27 AM
ती जस्तै महान पोइन्टहरू, स्टेफनी हो। यसले मलाई आश्चर्य गर्दछ कि यी नेटवर्कहरू कहिलेकाँही कति मूल्यवान हुन्छन्। 🙂 म खुसी छु कि तपाईं मेरोमा हुनुहुन्छ! तपाईं मलाई एक पिक अप आवश्यक छ जब पुग्न हिचकिचाउनुहोस्!
सेप्टेम्बर १,, २०११ 5::2011० अपराह्न
धेरै हृदय-अनुभूति भएको र भावनात्मक पोष्ट जुन वास्तवमै मसँग बोल्दछ। मेरो पुरानो नियोक्ता (होमबिल्डिंगमा) र एक पूर्व एजेन्सी कार्यान्वयनको दिवालियापन पछि उनको आफ्नै एजेन्सी सुरु गर्ने कोहीको रूपमा, मलाई उस्तै दबाबहरू थाहा छ।
म आफैसँग एक पटक छुट्टी को औचित्य प्रदान गर्न को लागी धेरै चोटि कुस्ती गरेको छ; हरेक दिन १ 13 घण्टा भन्दा कम काम गर्न, एक ग्राहकले अनुरोध गरेको 50० औं "नि: शुल्क" आईटमको लागि शुल्क लिन र हाम्रो व्यापार बढाउन। हामी मन्दीको माध्यमबाट बढेका छौं र अद्भुत ग्राहकहरू छन्, तर अझै पनि, मागहरू ठीक त्यस्तै छन् तपाईंले उनीहरूलाई रेखांकित गर्नु भएको छ।
डग्लस उनी एक असाधारण साथी थिए। गत वर्ष मैले उहाँलाई दुई जना पाहुना अतिथि पाएँ, उहाँ अत्यन्त दयालु हुनुहुन्थ्यो कि यो मेरो पहिलो प्रत्यक्ष टाढाको प्रसारण हो र मलाई लाग्यो कि मैले आफूलाई सुन्न मात्र कराइरहेको छु।
मँ मान्छेको अपेक्षाहरु एक पछाडि डायल गर्न को लागी सहमत छ।
जहाँसम्म मान्छेहरू भन्दै छन् हाम्रो अनलाईन व्यक्तित्वहरू हाम्रो अफलाइन लाइनसँग मेल खाँदैनन् म असहमत छु। ट्रे त्यो व्यक्तिमा व्यक्ति दिँदै थियो। हामी सार्वजनिक व्यक्ति / व्यक्तित्वको रूपमा हाम्रो व्यक्तिगत बिटको अनलाइन राख्न इच्छुक छैनौं। किन हामी यो कसैको व्यवसाय छैन।
त्यसोभए तपाईं हाम्रो सामाजिक संचारमा के साझा गर्नुहुन्छ?
मैले यसबाट लिनको लागि छनौट गरेको छु "ट्रेसँग मेरो सम्बन्धको कारण म अरूसँग कसरी हुन सक्छु?"
म एक चियरलीडर बन्न जारी छ र म भरोसा गर्न आवश्यक छ को लागी एक पटक निजी नेटवर्क मा भरोसा गर्न जारी छ।
मेरो प्रेम र प्रार्थना ट्रेका बच्चाहरूलाई जान्छ किनकि मलाई थाहा छ यो विनाशकारी थियो जब मेरा आमाबुबाले २ 25 बर्षको विवाह पछि सम्बन्ध विच्छेद गरे, म केवल कल्पना मात्र गर्न सक्छु कि सम्बन्ध विच्छेदको कारण आत्महत्या गर्नु कत्ति पीडादायी हुन्छ।
दयालु शब्दहरूको लागि धन्यवाद, माइकल। मँ मँ सहमत छु कि मँ मेरो व्यक्तिगत व्यवसाय को बारे मा जान लोगों को चाहाना छैन। अर्कोतर्फ, यद्यपि, अनुयायीहरूले यो जान्नुपर्दछ कि जब उनीहरू पछ्याइरहेका छन् उस्को धेरै त्यस्तै चुनौतीहरू छन् (सार्वजनिक र निजी)। त्यहाँ सुपरमेन वा सुपरवुमेन जस्ता कुनै चीज छैन र मलाई लाग्छ कि हामीले यी सिद्ध व्यक्तित्वहरू फिर्ता डायल गर्न आवश्यक छ - वा हामी केवल 'पारदर्शिता' को बारेमा आफैलाई मात्र झूट बोल्छौं नि, होइन र?
ट्रेका साथीहरू र परिवारहरू मेरो प्रार्थनामा छन् - कस्तो भयावह, भयानक त्रासदी।
उत्कृष्ट पोइन्ट डग! मसँग त्यस्तै स .्घर्षहरू छन्। मलाई जहिले पनि भनिएको छ कि मैले अधिक अनलाइन गर्न आवश्यक छ, तर म ज्यादै व्यस्त छु धेरै दिनहरू मात्र मेरो ग्राहकको काम गरिरहेको छु। हामी सक्दो कोसिस गर्नुहोस्, कोही पनि पूर्ण छैन त्यसैले तपाईं एक ठाउँमा जहाँ चमकनुहुन्छ, तपाईं अरूमा कमीकमजोरीहरू हुन सक्ने सम्भावना छ। यो धेरै दु: खी छ कि ट्रे लाई के भयो। हाम्रो व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन हाम्रो विस्तारित नेटवर्क भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र जब जग हिलाउँछ यो सजिलैसँग यो महसुस गर्न सक्दछ कि यो सबै भत्कनेछ। तिमीलाई आशिष्! ट्रेको परिवार र साथीहरूप्रति मेरो सहानुभूति।